Emulators ayaa muddo dheer suuqa ugu jirtay, maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in uu buuxiyo booska orday hal codsi oo loogu tala galay smartphone gaar ah in ay sii wadaan guud ahaan dhufto ee kala duwan. Tusaale ahaan, codsiga kulan loogu talagalay telefoonka Android waa in la sameeyaa diyaar u casriga ah ordaya on OS kale. Sidaas daraaddeed emulators moobaylka waxaa loogu talagalay in farqiga this. emulators iPhone waxaa loogu talagalay si codsiyada, kulan kuwaas oo loogu talagalay iPhone ama loo sameeyo cross-dhufto ee kale ee la heli karo iyo sidoo kale. Dadka isticmaali emulators iPhone inay tijaabiso bogagga internetka iyo sidoo kale hubinta codsiyada iPhone kala duwan iyo sidoo kale.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah emulators iPhone online ah oo baadhi kara sida website-ka eegi doonaan sida haddii la sameeyey harsan iPhone ah. Waa weyn si ay u tijaabiso iyo dib-uhabeynta xitaa haddii aadan haysan iPhone ah ee aad qubo.
Tani emulator online kuu ogolaanaysaa inaad ka raaxada ee aad desktop hubi website-ka. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah muuqaalada weyn ee emulator this.
Waxaad tijaabin kartaa website-ka in tirada screen kala duwan
Ka dhig aad heli karto, sida ay website-ka eegi doonaan sida shaashad weyn
Miiri habka qalabka mobile ogaanshaha
Wuxuu ka caawiyaa in aad Debug goobta iyada oo la isticmaalayo Firebug ama Chromebug
Waxaa simulates interface touchscreen ah iyo sidoo kale
Tani waa mid ka sii website online ah oo aad caawisaa hubinta sida website fiirin doonaa iPhone ah. Heerka aheyn ee casriga ah waxaa la qabsaneysa, waxaa muhiim ah in aad website waa in ay eegaan wanaagsan ma aha oo kaliya on desktop ah, laakiin sidoo kale on casriga ah. iPhone4 waa mid fudud oo ah in la isticmaalo webtool in simulates iPhone4 ah. Users durki karaa in lagu furo iPhone ee dalwaddii adigoo isticmaalaya tilmaamaha mouse ay ka dibna ay galaan URL codsiga internetka ee. Codsiga internetka ayaa u dhaqmaan doonaa sidii aan la ordi iPhone 4.
Features ee Emulator this
IPhone Free 4 Qabille oo online
Isku day inaad ka soo codsiyada web on dalwaddii iPhone4
Tashiilo waqtiga imtixaanka
Waxa uu leeyahay muuqaalada aad u yar
Sameeysa A u baahan doonaa qaababka hadda in ka badan waxa lagu hadda la siiyaa
Tani waa mid ka mid ah goobta oo waxay ka caawisaa ku dhiirigelinayaan in uu si aad u hubiso website ku saabsan tirada screen kala duwan. Waxa ay taageertaa iPhone 5 iyo 6. Faa'iidada ugu fiican yahay waa ka baxaa qaraarada screen galay pixels ah, si hag hagaajin daqiiqadii in la samayn karaa. Waxa kale oo uu leeyahay calaamadaha su'aal taas oo loo soo diri karaa macaamiisha ha hubiyo sida web site eegi doonaa oo ay dareemaan si wixii isbeddel lagu markaas oo halkaas ka sameeyey kartaa.
Waa mid ka mid emulator online taasoo wax ka qaban kartaa tiro badan oo ka mid ah qalabka ay ku jiraan kiniinno iyo TV.
Waxa ay shaqo fiican oo muujinaya sida ay web site aad fiirin doonaa qalabka ugu dambeeyey
Waxay leedahay interface fudud iyo kala guurka xunna sameeyo.
Ma qorayo haya'ad kala duwanaanshaha u dhexeeya qalabka
iPhone emulator u PC
Waxaa jira baahida sii kordhaya dadka emulators iPhone u pc si ay u abuurto jawi ah in ay sii wadaan codsiyada macruufka on PC. Waa caan ah, sababtoo ah waxaa kuu ogolaanaysaa inaad isticmaasho oo dhan kulan iyo codsiyada markii hore loogu talagalay iPhone la heli karo in ka badan PC.
iPadian : tani waa emulator ah iPhone oo kuu ogolaanaya in aad codsiga ama kulan kasta oo macruufka isticmaali ka. Waa emulator aad u faa'iido sida ay u maamulaan kartaa Windows, Mac iyo Linux.
MobiOneStudio : Tani waa mid ka macruufka emulator dheeraad ah oo kaa caawin kara horumarinta si ay u tijaabiso codsiyada ay Gudubtay dhufto. Halkaan hoose waxaad ka ciyaaro kulan ayaa sidoo kale aan ku xirid kasta. Waxay kaloo ka caawisaa in dhismaha codsiyada cross-madal in daqiiqo.
Waxay qaadataa waqti iyo samir in ay bartaan xirfadda
Ma aha sax ah freeware ah, laakiin, la heli karo sidii maxkamad oo bilaash ah shan iyo toban maalin
AiriPhoneEmulator: Tani waa xirmo buuxda oo isticmaalaya oo ma noqon doonto in aad awood u ciyaaro kulan oo kaliya, laakiin sidoo kale ay helaan iyo wicitaanada. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad soo dirto fariimaha codka, ku dar faahfaahinta xiriirada aad ugu jeceshahay. Dhammaan codsiyada laga heli karaa dukaanka tufaax awood u yeelan doonaan in ay sii wadaan on this iyada oo aan wax dhib ah jiraan.
Waxa aan si buuxda u shaqaynaysa
Browser ayaa web, Safari iyo codsiyada badan oo kale oo waxaa la helay telefoonka priginal aan helay replica this.
by Basaasku software
iPhone Emulator u Mac
Si ka duwan Android, mana jiraan dad badan oo emulators macruufka laga helo suuqa si ay jiraan a kale oo aad u yar. Sidaas waxa uu noqonayaa mid yara daalin hubinta codsiyada macruufka. Halkan waxa ku jira 3 macruufka emulators ugu fiican oo loo isticmaali karaa baaritaanka iyo tijaabinta codsiyada macruufka.
Kanu waa habka ugu fudud ee aad codsiga macruufka imtixaanka. Oo dhan u baahan yahay in la sameeyo waxaa uploading codsiga macruufka ah ee App.io oo halkan waxa loo dardargelisay karaan qalab kasta oo pc / Mac / telefoonada Android.
Waxaa loo adeegsan karaa sidii maxkamad oo lacag la'aan ah 7 maalin ah
Tani waxay la mid yahay sida App.io. Tani waxay aad u xor u yahay inuu geeyo codsiyada ayaa daruurtii ka dibna ay isticmaalaan arimahan ku dhufto ee kale si aad u aragto sida ay u shaqeeyaan siinayaa. Waxa kale oo ay bixisaa macruufka demo ku nool.
Waa xoogaa daalid bilowga
Tani waa mid ka sii madal si ay u tijaabiso codsiyada aad macruufka. Tani waxay la mid ku xidhan yahay ilaa la Apple oo ku siinayaa boosteejo ah si ay u tijaabiso oo ay maamulaan codsiyada.
Sida labada dejiyeyaasha yihiin kaalinta hore ee suuqyada casriga ah, mana jiraan emulators badan in uu ordo codsiyada mid kasta oo dhinaca kale ah. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo isticmaala Android rabtaa inaad baadhis oo ay maamulaan codsiyada macruufka harsan qalabka ay. Waxay soo bixi kartaa emulator macruufka ah ee Android oo ay isticmaalaan barnaamijyadooda macruufka on qalabka ay
> Resource > Emulator > The Best 12 iPhone Emualtors u PC, Mac iyo Android